News - Mabaadi'da Shaqaynta ee Mashiinka Mashiinka iyo Nidaamkiisa.
In habka wax soo saarka caaryada, qayb la xirrira ee caaryada inta badan u baahan yahay in la safeeyey dusha. Barashada tikniyoolajiyadda sifaynta waxay hagaajin kartaa tayada iyo nolosha adeegga caaryada oo sidaas awgeed waxay sare ugu qaadi kartaa tayada sheyga. Maqaalkani wuxuu soo bandhigi doonaa mabda'a shaqada iyo habka loo sifeeyo caaryada.
1. Habka sifaynta qaabka iyo mabda'a shaqada
Nadiifinta caaryadu badanaa waxay isticmaashaa silsiladaha dhagxaanta saliidda, giraangiraha dhogorta, warqadda ciida, iwm, si markaa dusha sare ee maaddadu ay plastically u liidato qaybta ugu sarreysa ee dusha sare ee shaqada ayaa loo saaraa si loo helo dusha sare, oo guud ahaan gacanta lagu sameeyo . Habka wax lagu shiido iyo nadiifinta super-ganaaxa ayaa looga baahan yahay tayada dusha sare. Mashiinka iyo ganaaxa super-ganaaxa waxaa laga sameeyay qalab wax lagu shiido oo gaar ah. Dareeraha nadiifinta ee ay ku jiraan xoqid, waxaa lagu cadaadiyey dusha sare ee mashiinka si loo sameeyo dhaq-dhaqaaq xawaare sare leh. Nadiifintu waxay ku guuleysan kartaa dusha sare ee Ra0.008μm.
2. Nidaamka nadiifinta
(1) khafiif ah
Mashiinka wanaagsan, EDM, shiidi, iwm waxaa lagu nadiifin karaa makiinadda dusha sare ee wareegga oo leh xawaare wareeg ah oo ah 35 000 illaa 40 000 r / min. Kadibna waxaa jira dhagax saliid lagu shiidi karo, kafeega dhagxaanta saliida oo lagu daray kerosene sida saliid ama qaboojiye. Amarka adeegsiga waa 180 # → 240 # → 320 # → 400 # → 600 # → 800 # → 1 000 #.
(2) Semi-ganaax nadiifinta
Semi-dhammeystirka badanaa wuxuu isticmaalaa warqadda ciida iyo gaasta. Tirada warqada ciida waa kala horeysaa:
400 # → 600 # → 800 # → 1000 # → 1200 # → 1500 #. Xaqiiqdii, # 1500 sandpaper kaliya waxay isticmaashaa biraha caaryada ah ee ku haboon adkeynta (kor ku xusan 52HRC), kumana haboona birta hore loo adkeeyay, maxaa yeelay waxay sababi kartaa waxyeelo dusha sare ee birta qallalan oo ma gaari karto saameynta la doonayo ee wax lagu nadiifiyo.
(3) nadiifinta wanaagsan
Nadiifinta wanaagsan waxay inta badan isticmaashaa dhejiska xoqan ee dhejiska. Haddii lagu shiidayo sharooto dharka lagu nadiifiyo si loogu daro alxanka budada la xoqin karo ama koollada la xoqin karo, amarka sida caadiga ah loogu shiido waa 9 μm (1 800 #) → 6 μm (3 000 #) → 3 μm (8 000 #). 9 μm dhejiska dheemanka iyo shaandhada dharka lagu nadiifiyo ayaa loo isticmaali karaa in looga saaro calaamadaha timaha 1 200 # iyo 1 50 0 # warqadda ciidda. Dabeecadda ayaa markaa lagu fuliyaa iyadoo la dareemayo iyo dheeman dheeman ah oo ah 1 μm (14 000 #) → 1/2 μm (60 000 #) → 1/4 μm (100 000 #).
(4) jawi shaqo oo dhalaalaya
Nidaamka nadiifinta waa in si gooni gooni ah loogu fuliyaa laba goobood oo shaqo, taas oo ah, goobta wax lagu shiido ee qallafsan iyo goobta wax lagu nadiifinayo ee wanaagsan ayaa la kala saarayaa, waana in taxaddar lagu sameeyaa in la nadiifiyo walxaha bacaadka ah ee ku haray dusha sare ee goobta shaqada hore. hawsha.
Guud ahaan, ka dib marka si qallafsan loo nadiifiyo dhagxaanta saliidda illaa 1200 # warqad-sanduuq, qeybta shaqada ayaa loo baahan yahay in lagu sifeeyo si loogu nadiifiyo boodh la'aan, iyadoo la hubinayo in aan habaas ku jirin hawadu u hoggaansamin dusha caaryada. Shuruudaha saxda ah ee ka sarreeya 1 μm (oo ay ku jiraan 1 μm) waxaa lagu sameyn karaa qolka nadiifinta nadiifinta. Sifiican oo sax ah, waa inay ahaataa meel gabi ahaanba nadiif ah, maadaama boodhka, qiiqa, qolofta iyo dhibcaha biyaha ay goyn karaan dusha sare ee saxsan.
Ka dib marka geedi socodka nadiifinta la dhammeeyo, dusha sare ee qalabka shaqada waa in laga ilaaliyaa boodhka. Marka hawsha nadiifinta la joojiyo, dhammaan astaamaha iyo saliidaha waa in si taxaddar leh looga saaraa si loo hubiyo in dusha sare ee qalabka shaqadu nadiif yahay, ka dibna lakab ka sameysan dahaadh ka-hortagga miridhku waa in lagu buufiyaa dusha goobta shaqada.
Waqtiga boostada: Jan-10-2021